1530nm CW Pigtailed Laser Diodes Single Mode Fiber ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > Coaxial pigtailed လေဆာ diodes > 1530nm CW Pigtailed လေဆာ Diodes တစ်ခုတည်း Mode ကို Fiber
1530nm CW Pigtailed လေဆာ Diodes တစ်ခုတည်း Mode ကို Fiber
1530nm CW Pigtailed Laser Diodes Single Mode Fiber တွင် DFB လေဆာများတပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းသည်အကောင်းဆုံးချိတ်ဆက်မှုထိရောက်မှုအတွက်တိကျစွာတွဲဖက်ထားသည့်ဖိုင်ဘာပွတ်တိုက်အားရှိသည်။ ၁၅၃၀nm အလယ်ဗဟိုလှိုင်းအလျားဗားရှင်းတွင်ပုံမှန်အားဖြင့် ၁.၅ မဂ္ဂါဝပ်ထုတ်လွှတ်နိုင်သောစွမ်းအင်ရှိပြီးနောက်ဖက်မျက်နှာပြင်ဖော့ဒီodeodeပါ ၀ င်သည်။ 9/125 singlemode fiber pigtail သည် FC / APC သို့မဟုတ် FC / PC style fiber optic connector နှင့်အဆုံးသတ်သည်။ လျှောက်လွှာများတွင်မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များနှင့်ကိရိယာများနှင့်လေဆာရောင်ခြည် diode light source လိုအပ်သည့် optical တူရိယာများပါ ၀ င်သည်။
၁၅၃၀nm CW Pigtailed Laser Diodes Single Mode Fiber ၏အကျဉ်းချုပ်
1530nm CW Pigtailed လေဆာ Diodes တစ်ခုတည်း Mode ကို Fiber ၏ 2. နိဒါန်း
၁၅.၃၀nm CW Pigtailed Laser Diodes Single Mode Fiber ၏ထူးခြားချက်များ
DFB လှိုင်းအလျားတစ်ခုတည်း mode ကိုလေဆာ;
CW သို့မဟုတ် Pulse စစ်ဆင်ရေး;
operating အပူချိန်အကွာအဝေး-20âမှ + 75âမှ;
built-in မော်နီတာ photodiode;
4. 1530nm CW Pigtailed Laser Diodes Single Mode Fiber ကိုအသုံးပြုခြင်း
CATV ပြန်လာ - လမ်းကြောင်း;
အခြား Analog ဂီယာစနစ်။
1530nm CW Pigtailed လေဆာ Diodes တစ်ခုတည်း Mode ကိုဖိုင်ဘာ၏ 5. Electro-Optical ဝိသေသလက္ခဏာများ (T = 25â 'ƒ)
အလယ်လှိုင်းအလျား အိုင်စီ PO = PF 1520 1530 1540 nm
optical output ကိုပါဝါ PF IF = ITH + 20mA2- - mW
လက်ရှိ Threshold အိုင်တီ410 mA
operating ဗို့အား VF - - 1.2 1.5 pF
အချိန်ထ / ကျဆုံးခြင်းအချိန် TR / TF IF = ITH၊ PO = PF (၂၀-၈၀)% - - 0.4 ns
လက်ရှိစောင့်ကြည့် ငါက PO = PF 0.1 - 1 mA
ရောင်စဉ်တန်းအကျယ် (-20dB) Î” Î» IF = ITH + 20mA 1.6 2.5 nm
အမှားခြေရာခံခြင်း TE - -1.0 - 1.0 dB
အမြင်အထီးကျန် ISO - 30 - - dB
2Sec အမိန့်အချင်းချင်းမော်ဂျူပုံပျက် IMD2 - - - -50 dBc
3rd အမိန့်အချင်းချင်းမော်ဂျူပုံပျက် IMD3 - - - -60 dBc
ဘေးထွက် mode ကိုဖိနှိပ်ရိက္ခာ SMSR PO = 2mW 40 - - dB
၆။ ထုပ်ပိုးပုံနှင့် PIN-OUT အဓိပ္ပါယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) ၁၅၃၀nm CW Pigtailed Laser Diodes Single Mode Fiber ၏အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ)
၇။ ၁၅၃၀nm CW Pigtailed Laser Diodes Single Mode Fiber ကိုသယ်ဆောင်ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
A: ကျနော်တို့မှာ 1270nm ~ 1610nm 1625nm လေဆာ diode ရှိသည်။
hot Tags:: 1530nm CW Pigtailed Laser Diodes Single Mode Fiber၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊